မမြဲတော့သော တွဲလက်များ (Has China Lost Myanmar?) - News @ M-Media
in ဆောင်းပါး — January 22, 2013
ဇန်နဝါရီ ၁၅ ၊ ၂၀၁၃
မြန်မာတို့၏ မရေမရာဒီမိုကရေစီအတွေးက အနောက်ဖက်သို့ ဦးလှည့်လိုက်သည်နှင့် တရုတ်တို့က လူမျိုးစုပြဿနာကိုမွှေပေးလိုက်သည်။မြန်မာအစိုးရကိုဒေါသထွက်လာအောင် ဆွပေးလိုက်ပြီးပြသနာကို အရှိန်မြှင့်ပေးလိုက်သည်။ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်တက်လာပြီးနောက်ပြန်လည် ထူထောင်ရေးများလုပ်လာသည့် ၂၀၁၁ မှစ၍ တရုတ်တို့နှင့်ပြဿနာ စတက်လာခဲ့သည်။ တရုတ်တို့သည် သူတို့၏အိမ်နီးချင်းမြန်မာနှင့် ဆယ်စုနှစ်ပေါင်း အတော်ကြာနွေးထွေးသော ဆက်ဆံရေးထူထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာ့ သဘာဝ သယံဇာတများနှင့် နိုင်ငံခြားရေး မူဝါဒတို့အားမောင်ပိုင်စီးခဲ့သည်။ ယခုအခါမြန်မာသည် လုံးလုံးလျားလျားမဟုတ်သေးသော်လည်း ဒီမိုကရေစီအသွင်သို့ ကူးပြောင်းနေပြီဖြစ် သဖြင့်မြန်မာပြည်သူများသည် ယခင်စစ်အစိုးရနှင့် သူတို့၏စီးပွားရေးများအား အထောက်အပံ့ များစွာပေးခဲ့သဖြင့် မချစ်သော်လည်းအောင့်ကာ နမ်းခဲ့ရသည့် ဘေဂျင်းအား မလိုလားကြောင်း ပြသနေကြပြီဖြစ်သည်။
လက်ရှိမြန်မာ့နိုင်ငံရေးမှာဒေသတွင်း မတည်ငြိမ်မှုများနှင့် ကြုံတွေ့နေရဆဲဖြစ်သည်။ တရုတ်တို့ကလည်းမြန်မာ့နယ်စပ်သို့ စစ်တပ်များပို့ထားသည်။ ဇန်န၀ါရီလစောစောပိုင်း ကတည်းက ပို့ထားသော တရုတ်စစ် တပ်များသည်မြန်မာ့ပိုင်နက် အတွင်းဖြစ်ပွားနေသော စစ်ပွဲ၏ နောက်ဆက်တွဲ ဖြစ်လာနိုင်ချေများအား ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းဖြစ်သည်။
တရုတ်သည်သူ့အတွက် အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာထွက်ပေါက်အဖြစ်မြန်မာအား အပိုင်တွက်၍ မရတော့ပေ။ ထို့ပြင် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအနက် သူ့အား သစ္စာခံသောထောက်ခံသူ မိတ်ဖက်အဖြစ်လည်း သတ်မှတ်၍ မရတော့ပေ။ မြန်မာု့မြို့တော်သစ်နေပြည်တော်နှင့် ၀ါရှင်တန်တို့အကြား ဆက်ဆံရေး ပိုမိုနွေးထွေးလာခဲ့သည်။ အမေရိကန် က အာရှ၏ချိန်ခွင်ညှာ အချိန်အဆသစ်ကိုမြင်လာသည့်အတွက် ဘေဂျင်းကစိုးရိမ်လာခဲ့သည်။ ဘေဂျင်းအတွက် အခြေအနေမှာလည်း ပိုဆိုးလာခဲ့သည်။ မုံရွာဒေသတွင် ရှိသည့်နိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံးကြေးနီ သတ္တုတွင်း မှာလည်း ရွာသူရွာသားများနှင့် ဘုန်းတော်ကြီးများ၏ ဆန္ဒပြမှုကို ရင်ဆိုင်နေရသည်။ ထိုသတ္တုတွင်းမှာ စစ်အစိုးရထိန်းချုပ်သော ဦးပိုင်ကုမ္ပဏီနှင့် တရုတ်လက်နက်ကုမ္ပဏီ တို့ ပူးတွဲ လုပ်ကိုင်လည်ပတ်နေသည့် သတ္တုတွင်းဖြစ်သည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်ကလည်း သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်သည် တရုတ်ကုမ္ပဏီက ဒေါ်လာ ၃.၆ဘီလီယံရင်းနှီးမြှုပ်နှံကာ တည်ဆောက်နေသည့်မြစ်ဆုံဆည် စီမံကိန်းကိုပြည်သူများ၏ ဆန္ဒနှင့်ဆန့်ကျင်သည်ဟုဆိုကာ ရပ်တန့်ထားရန် အမိန့်ပေးခဲ့သည်။
မုံရွာတွင် ဖြစ်ပေါ်သော ဆန္ဒပြဆန့်ကျင်မှုများကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရှိနေသော တရုတ်၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများမှာ အန္တရာယ် ရှိနေပြီလောဟု စိုးရိမ်စိတ်ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။ ဘေဂျင်းသည်မြန်မာပြည်ရှိ ၎င်းစိတ်ဝင်စားသည့် ကိစ္စများကို ထိခိုက်နာကျင်စေခြင်းမှ အကာအကွယ်ပေးရေး ဆိုသည့်ကိစ္စကို အနည်းငယ်သာ လုပ်နိုင်ကြောင်း သိလိုက်ရသည်။ အစိုးရပိုင်းမှ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာစိစစ်သူများ၊နိုင်ငံခြားရေး မူဝါဒဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များ အပါအ၀င် အရှေ့တောင်အာရှရေးရာ ကျွမ်းကျင်သူများက တရုတ်အစိုးရအနေနှင့် သူ၏မူလလက်ဟောင်းမိတ်ဆွေများဖြစ်ကြပြီး နယ်ခြားတွင်နေထိုင်ကြသည့် လူမျိုးစု သူပုန်များဖက်သို့ပြန်လှည့်သင့်ကြောင်းပြောဆိုနေကြသည်။ တရုတ်ပြည်အနောက်တောင်ဖက် ယူနန်ရှိ “ယူနန် ရဲ ကောလိပ်” မှ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံပါမောက္ခ လျန်ဂျင်းယွန် က ၂၀၁၁ ခုနှစ်က ရေးသားတင်သွင်းခဲ့သော စာတမ်းမှာ အတော်သြဇာရှိသော စာတမ်းဖြစ်သည်။ ထိုစာတမ်းတွင် အကယ်၍ တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ရှိ လူမျိုးစု သူပုန်များကိုကောင်းစွာ အသုံးချနိုင်ခဲ့လျှင် တရုတ်အတွက်ရေရှည်သစ္စာရှိသည့် မိတ်ဆွေများဖြစ်လာနိုင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်ကြုံနေရသည့် အမေရိကန်နှင့် တရုတ်တို့၏ထိပ်တိုက် ရင်ဆိုင်နေရသည့်ရှေ့တန်းအတွက် အသုံးဝင်နိုင်ကြောင်း သုံးသပ်ထားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရကတည်းက သီးခြားခွဲထွက်ရေးအတွက် တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြသော “၀” နှင့် “ကချင်” မျိုးနွယ်စုများ သည် ကာလကြာမြင့်စွာကတည်းက တရုတ်နှင့် ချစ်ကြည်ခဲ့ကြသည်။ ၁၉၆၀ ခုနှစ်များဆီက တရုတ်နှင့် ဆက်ဆံရေး အကောင်းဆုံး ကာလများဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုစဉ်က ထိုမျိုးနွယ်စုများနှင့် တရုတ်အမျိုးသား များပါဝင်သော ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီအား တရုတ်က ထောက်ပံ့ပေးခဲ့သဖြင့် ဗဟိုအစိုးရအား ဆန့်ကျင် တော်လှန်ရာတွင် တစိတ်တပိုင်း အောင်မြင်မှုရခဲ့သည်။ ၁၉၉၀နှစ်များတွင် ဘေဂျင်းက လူနှင့်ပစ္စည်းထောက်ပံ့မှုများကို ရပ်ဆိုင်းခဲ့သည်။ သို့သော် ယူနန်ပြည်နယ်အစိုးရသည် နယ်စပ်ကူးလူးဆက်ဆံမှုကို ပုံစံပြောင်းပြီး စီးပွားရေး ဆက်ဆံမှုနှင့် မူးယစ်ဆေးဝါး အစားထိုးသီးနှံ အစီအစဉ်များဖြင့် အစားထိုးခဲ့သည်။ ၂၀၁၁ စက်တင်ဘာတွင် နေပြည်တော်နှင့် “၀” တို့ငြိမ်းချမ်းရေး သဘောတူနိုင်ခဲ့ကြသည်။ သို့သော် ကချင်စစ်တပ်နှင့်မြန်မာစစ်တပ်တို့မှာမူ စစ်ပွဲဆင်နွှဲနေဆဲဖြစ်သည်။မြန်မာတပ်များသည် ကချင်တပ်များကို တိုက်ရာတွင် လေကြောင်းမှ တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း ဇန်န၀ါရီ ၂ရက်နေ့ကပြောခဲ့သည်။ ကချင်စစ်တပ်ကလည်း သူတို့ထံတွင် စစ်သည်အင်အား တစ်သောင်းခွဲရှိကြောင်းကြွားနေဆဲဖြစ်သည်။
ဘေဂျင်းသည် အများပြည်သူသိအောင် ကြေငြာခြင်းကိုမူအနည်းငယ်သာပြုလုပ်သည်။ တရုတ်နှင့်မြန်မာတို့ သည်အရေးပါသော အိမ်နီးချင်းများဖြစ်ကြကြောင်း၊နေပြည်တော်နှင့် ၀ါရှင်တန်တို့ ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်လာ သည်ကိုလည်း တရုတ်ကကြိုဆိုပါကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာနမှဆိုသည်။ သို့သော်ဘေဂျင်းနှင့် လွန်ခဲ့သော ဆယ်စုနှစ်များက ဆက်ဆံခဲ့ရာတွင် ဆန္ဒရှိသလောက် ရလဒ်ကောင်းများ မရခဲ့ကြောင်း သိမ်မွေ့စွာပြောခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် တရုတ်သည် ချဉ်းကပ်ပုံ ပြောင်းသင့်ပြီဖြစ်ကြောင်းဖြင့်ပြီးခဲ့သော နိုဝင်ဘာလက ကျင်းပသော ဧည့်ခံပွဲတွင် တရုတ် နိုင်ငံရေးဆန်းစစ် စိတ်ဖြာသူ တစ်ဦးကပြောသည်။ ဘေဂျင်းမှနောက်ထပ်သြဇာရှိသော ဆန်းစစ်သူတစ်ဦးကလည်း နယ်စပ်ရှိ မျိုးနွယ်စုများသည် မိမိတို့အတွက် ဖဲချပ်ဖြစ်ကြောင်း တရုတ်ပြည် သည် ထိုဖဲချပ်ကိုကောင်းစွာကစားသင့်ကြောင်းပြောသည်။ သူ၏အမြင်သည် လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းက ဆုံခဲ့ရသည့်နိုင်ငံရေး ဆန်းစစ်သူများ၏ အမြင်များနှင့်တူနေသည်။ သို့သော်မည်သူ တစ်ဦးတစ်ယောက်ကမျှ တိုင်းသိပြည်သိ မပြောခဲ့ကြပေ..။
http://www.foreignpolicy.com/တွင် ဖော်ပြခဲ့သည့် ဆောင်းပါးရှင် YUN SUN ၏ Has China Lost Myanmar? ဆောင်းပါးကို M-Media မှာ ဆီလျော်အောင် ဘာသာပြန်ဆိုပါသည်။
Tags: BORDERS, China, DEMOCRACY, Myanmar, RACE/ETHNICITY, SOUTHEAST ASIA
မျောရိုကို သမ်မတထရမျ့ကို နိုငျငံ၏ အမွငျ့ဆုံး ဆုတံဆိပျခြီးမွှငျ့
ကိုဗဈကွောငျ့ ကမ်ဘာတဈဝှမျးတှငျ သဆေုံးသူ ၂ သနျးကြျောပွီ
Categories Select Category Advertising (5) Dubai (2) EDITORIAL (14) English Version (45) M-Media Blog (113) ကဗျာ (77) အစ္စလာမ်အေးရိပ် ဆာယာသို့ (18) M-Media Movies Guide (2) M-Media စာအုပ်စင် (23) M-MediaNewsLetters (15) Media To Monitor (116) Hate Crime စောင့်ကြည့်ရေး (26) ပြည်တွင်း (26) Our Perspectives (95) Uncategorized (2) ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံများနှင့် ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာ (19) ကျန်းမာရေးနှင့်ဆေးပညာ (480) ထင်ပေါ်ကျော်ကြား ပုဂ္ဂိုလ်များ (210) ထူးချွန်လူငယ် (16) ရဲဘော်ကိုထွေး (6) ဦးရာဇတ် (23) ပညာရေး (91) မိုးလေ၀သ (4) ရင်ဖွင့်လွှာ (3) သတင်းများ (17,390) Analysis (7) Interview (146) Weekly News (2) ကမ္ဘာ့မွတ်စလင် သတင်းများ (1,572) ကာတွန်း (50) ဓါတ်ပုံသတင်း (92) ရုပ်သံသတင်း (62) သတင်းသုံးသပ်ချက် (2) သတင်းဆောင်းပါး (136) သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ (563) သူ့အမြင် (220) အားကစား (2,703) ဆောင်းပါးရှင် အာဘော် (18) ပြည်သူ့အသံ (23) မြန်မာသတင်း (4,060) နိုင်ငံတကာသတင်း (9,000) အာဖရိက (471) အာရှ-ပဖိဖိတ် (2,903) အမေရိက (1,079) အရှေ့အလယ်ပိုင်း (2,149) ဥရောပ (1,017) သုတ၊ရသနှင့်အထွေထွေ (1,391) Essay (1) M-Media Knowledge (35) Quote (16) ကမ္ဘာကျော် မွတ်စလင်များ (128) ကမ္ဘာကျော်မွတ်စလင် အားကစားသမားများ (30) ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ရပ် (6) စာတမ်း (5) ဘာသာပြန် (161) ရသစာပေ (4) ဝတ္ထုတို (6) သုတ၊ရသ (57) သရော်စာ (29) ဆောင်းပါး (870) ထွေရာလေးပါး (84) ပေးစာ/ပြန်စာကဏ္ဍ (26) ကြေငြာချက် (59) နှလုံးသားအာဟာရ (29) သူတို့ပြောသမျှ သူတို့အကြောင်း (2) အမှားပြင်ဆင်ချက် (2) အနုပညာ (2) မြန်မာမွတ်စ်လင်မ်သမိုင်း (52) Kaman (1) Masjid In Myanmar (1) သမိုင်းထဲက ပုံရိပ် (17)
Archives Select Month January 2021 (42) December 2020 (99) November 2020 (48) October 2020 (65) September 2020 (79) August 2020 (56) July 2020 (59) June 2020 (63) May 2020 (71) April 2020 (91) March 2020 (77) February 2020 (84) January 2020 (88) December 2019 (70) November 2019 (71) October 2019 (89) September 2019 (81) August 2019 (67) July 2019 (88) June 2019 (75) May 2019 (85) April 2019 (85) March 2019 (76) February 2019 (99) January 2019 (78) December 2018 (76) November 2018 (77) October 2018 (128) September 2018 (122) August 2018 (126) July 2018 (155) June 2018 (119) May 2018 (151) April 2018 (156) March 2018 (141) February 2018 (125) January 2018 (131) December 2017 (148) November 2017 (162) October 2017 (215) September 2017 (200) August 2017 (210) July 2017 (209) June 2017 (201) May 2017 (196) April 2017 (205) March 2017 (203) February 2017 (211) January 2017 (245) December 2016 (235) November 2016 (276) October 2016 (265) September 2016 (244) August 2016 (252) July 2016 (242) June 2016 (290) May 2016 (242) April 2016 (254) March 2016 (283) February 2016 (284) January 2016 (329) December 2015 (341) November 2015 (358) October 2015 (417) September 2015 (303) August 2015 (277) July 2015 (268) June 2015 (293) May 2015 (302) April 2015 (238) March 2015 (266) February 2015 (260) January 2015 (282) December 2014 (262) November 2014 (255) October 2014 (273) September 2014 (226) August 2014 (233) July 2014 (246) June 2014 (217) May 2014 (249) April 2014 (280) March 2014 (264) February 2014 (255) January 2014 (326) December 2013 (291) November 2013 (257) October 2013 (255) September 2013 (203) August 2013 (233) July 2013 (233) June 2013 (206) May 2013 (172) April 2013 (114) March 2013 (153) February 2013 (70) January 2013 (96) December 2012 (101) November 2012 (130) October 2012 (168) September 2012 (82) August 2012 (118) July 2012 (93) June 2012 (76) May 2012 (53) April 2012 (31) March 2012 (24) February 2012 (8) January 2012 (13) December 2011 (19) November 2011 (10) October 2011 (11) September 2011 (12) August 2011 (33) July 2011 (28) June 2011 (7) May 2011 (15) April 2011 (9) March 2011 (8) February 2011 (12) January 2011 (15) December 2010 (16) November 2010 (21) October 2010 (29) September 2010 (30) August 2010 (4)